Shiinaha sanduuqa isgoyska korontada iyo wax soosaarka waxsoosaarka iyo alaab-qeybiye | Meesha
Sanduuqyada isgoysyada korantadawaxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gudbinta iyo qaybinta awoodda iyo isgaarsiinta. Qaybaha ugu muhiimsan ee qolofka is-goyska qolofkiisa iyo daboolkiisu badanaa waa caag ay soo saartay wax lagu duro oo la isku duro.
Sanduuqyada isgoysyada korantada ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa gudbinta iyo qeybinta awoodda iyo isgaarsiinta. Qaybaha ugu muhiimsan ee qolofka is-goyska qolofkiisa iyo daboolkiisu badanaa waa caag ay soo saartay wax lagu duro oo la isku duro. Sanduuqa isgoysku wuxuu u baahan yahay inuu u hoggaansamo halbeegga waxqabadka korantada ee adag, sidaa darteed waxaan ku soo bandhigi doonnaa sanduuqa isgoyska korantada iyo wax taaj oo kale.
Waa maxay sanduuqa isgoyska balaastik?
Sanduuqa isku xidhka korantada ayaa sidoo kale loo yaqaan sanduuqa isku xidhka, sanduuqa terminal, isku xiraha korantada, saldhiga terminal.
Sanduuqa isku xidhka korontadu waa xayndaabka isku xidhka korantada, si loo ilaaliyo isku xidhka isla markaana loo helo caqabad nabadgelyo.
Sanduuqa yar ee birta ama sanduuqa isku-xidhka ah ee caagga ah ayaa laga yaabaa inuu ka mid noqdo qayb ka mid ah marin-biyoodka korantada ama xarigga siligga (TPS) ee xargaha xargaha ee dhismaha.
Haddii loogu talagalay in lagu dhejiyo dusha sare, waxaa badanaa loo isticmaalaa saqafka hoose, sagxadaha hoostiisa ama lagu qarinayaa gadaashiisa gaar ahaan - gaar ahaan dhismooyinka guryaha ama ganacsiga. Nooca ku habboon (sida kan bidix ka muuqda) ayaa lagu aasi karaa malaastii gidaarka (in kasta oo qarsoodi buuxda aan hadda loo oggolaanaynin xeerarka iyo heerarka casriga ah) ama lagu ridi karo shubka - oo keliya daboolka muuqda.
Sanduuqyada korantada ee balaastigga ah waxay leeyihiin iskudarro iyo jajabyo. Sababtoo ah iyagu waa balaastig, looma baahna in silig dhulka lagu dhejiyo. Maaddaama ay ka samaysan tahay maaddad aan tabin, shidmayaasha iyo meelaha laga baxo ma soo gaabin karaan haddii ay taabtaan dhinaca sanduuqa.
Sanduuqyada balaastikada ah badanaa waxay la yimaadaan godad fure ah oo si xoog leh loogu dhejiyo furayaasha iyo meelaha laga baxo. Sanduuqyadan waxay ku yimaadaan hal-koox, laba-gaang, iyo xitaa qaabeynta kooxo badan.
Noocyada sanduuqa isgoyska korantada
Noocyada sanduuqyada isgoysyada korantada ayaa ah noocyo kala duwan: nooca gudaha, nooca bannaanka, nooca caabbinta danab sare, iyo nooca biyuhu xiraan. Maaddooyinka iyo shuruudaha amniga ayaa ku kala duwan deegaanno iyo dalal kala duwan. Sidaa darteed caaryada duritaanka iyo sameynta wax soosaarka ayaa sidoo kale kala duwan.
1. sanduuqa isgoyska korontada ee gudaha.
Noocyada dareeraha: ABS, PVC
Intooda badani waa sanduuqyada fiilooyinka ee xafiiska iyo guryaha. Waxaa loo isticmaalaa qaybinta awoodda gudaha iyo kontaroolka dhexe, iyo sidoo kale korontada laga baxo, iyo marin u helka iyo isgaarsiinta khadka isgaarsiinta. Awoodda guud ee shaqada waxay ka hooseysaa 250 volts. Dheecaanka balaastigga ah waxaa looga baahan yahay inuu u hoggaansamo darajada ololka ee UL94 V1 ~ V0.
2. sanduuqa isgoyska korontada ee banaanka.
Noocyada miraha: ABS, ABS / PC
Sanduuqa isgoyska banaanka ayaa looga baahan yahay inuu awood u yeesho inuu adkeysto banaanka heerkulka sare iyo hooseeya iyo qoyaanka roobka iyo daxalka gabowga qorraxda, qaab dhismeedka wax soo saarka ee biyuhu ka hortagaan, gabowga shucaaca anti-ultraviolet, la qabsada deegaanka heerkulka sare iyo hooseeya. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo balaastikado tayo sare leh, sida PC ama naylon, oo lagu daro waxyaabo gaar ah oo leh iska caabin heer sare ah oo loo yaqaan 'ultraviolet resistance' iyo waxqabadka heerkulka sare iyo hooseeya.
3. Sanduuqa isgoyska warshadaha.
Noocyada dareeraha: ABS, ABS / PC, Nylon
Sanduuqa isgoyska Warshadaha, inta badan waxay leeyihiin shuruudo waxqabad gaar ah, sida saxsanaanta cabbirka iyo xasilloonida, saliidda iyo caabbinta alkali, waxay xirtaa iska caabin. Qalabka caaga ah waa in loo xusho shuruudo kala duwan iyo saxnaanta caaryada waa in la go'aamiyaa.
4. sanduuqa isgoyska korantada iska caabiya.
Sanduuqa isgoyska waxaa inta badan loo isticmaalaa jawiga danab sare, sida armaajooyinka korantada, sanaadiiqda koontaroolka korantada, aaladaha qaybinta. Kuleylka wanaagsan iyo guryaha kahortagga gabowga ayaa loo baahan yahay. Nylon iyo balaastikada kale ee injineernimada guud ahaan waa la xushay.
5. Shaqada ugu weyn ee sanduuqa iskuxirka moduleka sawir-qaadista ayaa ah inuu isku xiro oo ilaaliyo module-ka qorraxda, isagoo sameynaya imminka ay soo saartay moduleka sawir-qaadeyaasha ah. Maaddaama ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah module-ka qorraxda, sanduuqa isku-xidhka ee moduleka sawir-qaadista waa shey dhammaystiran oo isku-dhafan naqshadaynta korantada, naqshad farsamo iyo codsi qalab. Waxay siisaa dadka isticmaala nidaam isku-dhafan oo isku-dhafan oo ah module-ka qoraxda.
6. Sanduuqa isgoyska biyuhu ka soo baxo.
Noocyada dareeraha: ABS, ABS / PC, PPO
Waxaa jira laba jaangooyo oo looga hortago biyaha.
A. Biibis gaaban oo dibadda ah, yacni biyaha toos looguma shubi doono badeecada.
T. Badeecaddu waxay ku dhex jirtaa biyo.
Shuruudaha biyuhu waxay badanaa ku xiran yihiin qaab dhismeedka qaybaha balaastigga, sida:
Ku kaydi giraanta wax lagu xidho isku-xidhka ama furitaanka;
Alxanka Ultrasound ee laba kalagoys:
Wax taaj oo kale duray duray.
Sanduuqa isgoyska biyuhu
Sanduuqa isgoyska balaastik ee banaanka
Sanduuqa isgoyska iftiinka gudaha
Tee sanduuqa isgoyska balaastigga ah
Isticmaalka sanduuqa isku-darka caagga ah
Nylon sanduuqa isgoyska
Shuruudaha loogu talagalay isticmaalka sanaadiiqda isku xidhka korantada
Sanduuqyada isgoysyada korantada waxay xiriir dhow la leeyihiin korontada waana inay u hoggaansamaan halbeegga amniga ama shuruudaha la xiriira, badanaa:
1. Cimilada iska caabinta: iska caabinta heerkulka sare iyo hooseeya, huurka
2. Kuleylka korantada
3. Iska caabinta danab sare, aaladda korantada iyo luminta korantada: Waxay ku shaqeyn kartaa danab sare ama hooseeya, heer dhexdhexaad ah iyo heer sare koronto.
4. Kala-baxa kuleylka: kuleylka ay soo saaraan qaybaha gudaha ayaa si dhakhso leh looga saari karaa.
5. Olol joojiyaha: Ma sahlana in la shido oo dab la dhaliyo.
6. Shucaaca anti-ultraviolet: Marka sanduuqa isgoyska korontadu kujiro iftiin xoog leh ama jawi bannaanka ah, ma noqon doono gabow iyo hawl gab shucaaca ultraviolet awgeed.
7. Iska caabinta daxalka: Aashitada, bey'adda alkali iyo milixda, ma bur burinayo waxna ma yeeli doono, waxayna shaqeyn kartaa muddo dheer.
8. Shaabadaynta iyo biyuhu: waxay awood u leeyihiin inay ka shaqeeyaan beero qoyan ama biyo ah
9. Ilaalinta deegaanka: Hubi in walxaha la isticmaalay sii deyn doonaan walxo sun ah ama qiiqa markii la kululeeyo ama la gubo, taas oo dhaawici doonta caafimaadka aadanaha.
Tixgelinta Naqshadeynta Sanduuqa Xiriirka Korantada
1. Xulashada qalabka: Waqtigan xaadirka ah, meelaha ugu muhiimsan ee laga isticmaalo alaabada sanduuqa iskudhafka biyuhu waa goob dhisme adag oo adag iyo hawo furan. Caabbinta saameynta, awoodda culeyska ma guurtada ah, hantida dahaarka, * aan sun ahayn, * iska caabbinta gabowga, u adkeysiga daxalka iyo dib u dhaca olol ee qalabka waa in la tixgeliyaa marka la tixgelinayo waxqabadka amniga ee alaabada. (Waxqabadka aan sunta ahayn ayaa si aad ah looga walaacsanaa, badanaa sababta oo ah haddii alaabada sanduuqa isgoyska aan biyuhu ka jirin marka laga hadlayo dabka, gubashadu ma sii deyn doonto gaasaska sunta ah iyo kuwa waxyeellada leh, badiyaa haddii ay dhacdo dab sababo neefsashada tiro badan oo gaasaska sunta ah iyo dhimashada ayaa lagu tiriyaa inta badan.
2. Qaabdhismeedka qaabdhismeedka: Tixgelinta waa in la siiyaa guud ahaan xoogga, quruxda, farsamaynta fudud, rakibidda fudud iyo dib-u-warshadaynta sanduuqyada isku-xidhka biyuhu ka soo galaan. Waqtigan xaadirka ah, badeecadaha sanduuqa isgoyska aan biyuhu soo saarin ee ay soo saaraan soo saarayaasha waaweyn ee caalamiga ah kuma jiraan qaybo bir ah, taas oo fududeyn karta habka soo kabashada badeecada. Si kastaba ha noqotee, qalabka ay isticmaalaan inta badan soo saarayaasha guryaha ayaa ka duwan, iyo waxyaabaha ka hortagga waxy ee qalabka waa kuwo liita. Guud ahaan, gelinta naxaasta ah ayaa lagu rakibay godka rakibidda ee sanduuqa isgoyska biyuhu ka soo baxo si loo kordhiyo awoodda rakibidda, taas oo kordhin doonta waqtiga iyo kharashka habka soo kabashada walxaha. Dhibaatooyinka noocan ah waxaa lagu xallin karaa iyadoo la doorto alaabta ceyriinka leh tilmaamayaasha waxqabadka sare ee ay bixiyaan soo saarayaasha caadiga ah.
3. Dhumucda Darbiga: Guud ahaan, marka la tixgelinayo qiimaha guud ee badeecada, dhumucda darbiga badeecada waa in la yareeyaa intii suurtagal ah si loola kulmo caabbinta saameynta iyo caabbinta waxy ee sheyga. Naqshadaynta sanduuqyada isgoysyada caalamiga ah ee aan biyuhu xirnayn, dhumucda gidaarka ABS iyo qalabka PC-ga guud ahaan waxay u dhexeeyaan 2.5 iyo 3.5 mm, caag galaas lagu xoojiyay caaggu guud ahaan wuxuu u dhexeeyaa 5 iyo 6.5 mm, dhumucda darbiga walxaha aluminium ee dhinta-gunta ayaa guud ahaan u dhexeeya 5 iyo 6.5 mm. Waxay udhaxaysaa 2.5 ilaa 6. Dhumucda darbiga walxaha waa in loo qaabeeyaa si loo buuxiyo shuruudaha rakibida inta badan qaybaha iyo qalabka.
4. Xiritaanka xulashada maaddada giraanta: Waxyaabaha sanduuqa isgoysyada ee biyuhu xiraan, qalabka giraanta wax lagu xidho ee badanaa la isticmaalo: PUR, EPDM, Neoprene, Silicon. Kala duwanaanta heerkulka, iska caabinta xiisadda, saamiga ballaarinta, adkaanta, cufnaanta, saamiga isku soo uruursiga iyo iska caabbinta kiimikada waa in lagu tixgeliyaa marka la dooranayo giraanta shaabadda.
5. Qalab xirxirida isku xirnaanta biyuhu xirxiraan oo marooji ah: Marka daboolka sanduuqa isgoyska aan biyuhu lahayn iyo salka la isku daro, qaybta muhiimka ahi waa balka. Xulashada qalabka boolku sidoo kale waa mid aad u muhiim ah. Waxyaabaha sida caadiga ah loo isticmaalo waa PA (nylon) ama PA alloy, iyo fur birta biraha ahama sidoo kale waa la isticmaali karaa. Awoodda qaabdhismeed waa in lagu tixgeliyaa qaabka naqshadeynta kore. Sababtoo ah isticmaaleyaasha kaladuwan waxay adeegsadaan siyaabo kala duwan waxayna la kulmaan shuruudo kala duwan, sida rakibidda qalabka wax lagu dhejiyo korantada iyo rakibidda gacanta, xoogga miisaanka furka waa in lagu tixgeliyaa qaabka.
Mashiinka sanduuqa isgoyska korantada iyo wax taaj oo kale
Qaybaha ugu waaweyn ee sanduuqa isgoysku waa guryaha caagga ah iyo daboolka. Waxaa lagu abuuray habka cirbadeynta balaastigga ah. Qalabku waa caaryada la isku duro.
Naqshadaynta sanduuqa isgoyska caaryada cirbadeynta waxay kuxirantahay qaabeynta qaab dhismeedka iyo soo saarida sanduuqa isgoyska, kaas oo go'aamiya qaabeynta qaabdhismeedka qaabka caaryada iyo saabka.
Birta iyo adayga caaryada la geliyaa waxay kuxirantahay qoraalada caaga ah, dusha sare ee badeecada iyo nolosha bartilmaameedka caaryada. Steel P20 waxaa badanaa loo isticmaalaa sida walxaha wax lagu shubo ee amarada caadiga ah, iyo S136 waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dusha sare ee dhalaalaya. Amarada waaweyn ee alaabada, caaryada godad badan ayaa loo baahan yahay si loo kordhiyo awooda wax soo saar.
Iskuxirka caaryada duro caag ah
Mestech waxay uruurisay khibrad hodan ah samaynta caaryada iyo soo saarista cirbadaha sanaadiiqda isgoysyada macaamiisha badan. Haddii aad baahi u qabto qaybo caag ah sanduuqa isgoyska, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Qaybaha caaga ah ee sifaynta biyaha
Xiga: Xarkaha caagga ah ee fiilada iyo siligga
Xirmada balaastigga taleefanka fiidiyowga ah
Qaybaha caaga ah ee sifaynta biyaha